Shopify Order Kuzadzikiswa, Ecommerce Order Kudonhedza - Sunson
Fufillment uye inodonhedza mhinduro
kwemwedzi mitatu yekuchengetedza kwemahara tanga kushandisa sevhisi yedu
yemahara bvunzo 2 mapasuru etsva mutengi
Saina Up Mahara →
Sarudza & kurongedza
Isu tinopa vatengi vedu zvakanakisa muCommerce kurongeka kuzadzikiswa kubva kuChina kuenda kuPasi rose ...
Kuzadzikiswa kuri pamusoro peanopfuura ekutumira maodha kune ako vatengi. Izvo ndezve kugadzira yekutanga kirasi kutenga ruzivo iyo inosiya inogara inoratidzika, iyo inovimbisa vatengi vako kuti varambe vachidzoka kuzora zvakare uye zvakare.
Yako Yakavimbika Warehouse & Order Kuzadzikiswa Partner muChina.
Yedu nyanzvi timu uye akangwara kuzadzikisa software.
Sekambani inotungamira tekinoroji-inofambisa simba muChina, Sunson muridzi weShenzhen Fulfillment Center uye Guangzhou Fulfillment Center, inoshandisa smart software kupa yakapusa uye yakavimbika kuzadzikiswa kwechirongwa chemabhizimusi eecommerce, shopify, Woo-commerce, kutengeserana kukuru, Amazon, Ebay, chishuwo, etc.
Sunson vakazvipira kupa imba yakachengetedzeka yekuchengetedza, kuzadzikiswa kwakanaka, sarudzo dzekurongedza dzakasiyana siyana, mhinduro dzinotenderera dzekutumira uye mamwe masevhisi anokosha-anobatsira kukubatsira kusimudzira bhizinesi rako nenguva shoma nemari.
Kutakura kwepasirese sevhisi
Kutanga 90 Mazuva Mahara
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota pinda kana kunyoresa kubva pane inotevera interface.